Wiko wuxuu soo bandhigayaa laba kale oo Android ah: Wiko Harry 2 iyo Wiko View 2 Plus | Androidsis
Nooca Faransiiska ayaa iibinaya oo hadda na keenay laba taleefan oo cusub oo Android ah: Wiko View 2 Plus iyo Wiko Harry 2. In yar ayaa hada ku dhawaaqday Wiko View 2 Go, kuwaas oo aan kaga hadalno khadadkaan dhexdeenna ah.
Waa goobta IFA ee uu ku soo bandhigay saddex taleefan oo ka mid ah Gelitaankan waxaan uga hadlaynaa labada eray. Taleefannada casriga ahi si wanaagsan ayey isugu dheellitireen qiimaha iyo tayada iyo naqshadeynta qeybaheeda.
Aragtida Wiko View 2 Plus waa terminaalka u imanaya inuu noqdo sida kan oo kale walaalkiis ka weyn Wiko View 2 Plus. Waxay ku imaaneysaa shaashad 5,932-inch ah oo leh 19: 2 HD Plus saamiga xallinta, Qualcomm Snapdragon 450 processor sideed-gees ah oo leh xawaare dhan 1,8 Ghz iyo 4GB RAM ah.
Midna kama maqna 64 GB xasuusta gudaha iyo batari 4.000 mAh ah oo ku siinaya dagaal kugu filan maalintii oo dhan. Kaamirooyinka ayaa sidoo kale wada socda si ay u soo bandhigaan laba dhinac oo dhinaca dambe ah 12 MP + 12 MP, iyo mid hore oo gaaraya 8 megapixels.
El Wiko Harry 2 waa walaalka ka yar oo leh shaashad 5,43-inji ah 18: 9 HD +, + Mediatek MT6739WA afar geesle afar geesle ah oo lagu dhegeysto 1,3 GHz iyo 2 GB oo RAM ah Ahaanshaha kan ugu yar saddexda la soo bandhigay, waxaa sidoo kale laga dareemayaa kaydinta gudaha oo leh 16GB (oo leh ikhtiyaarka microSD sida 2 Plus) iyo batariga jooga 2.900mAh.
Ma laha waji furid sida Wiko View 2 Plus, in kasta oo ay leedahay Dual SIM sida walaalkeed ka weyn. Labaduba waxay leeyihiin Android 8.1 Oreo si ay nooga helaan qiimayaal u dhexeeya 99 euro oo ah Wiko Harry 2 iyo 199 euro oo loogu talagalay Wiko View 2 Plus.
Laba taleefan oo cusub oo laga soo qaatay magaca Faransiiska ee Wiko ku yimaada si wanaagsan oo isku dheellitiran labadaba qiimaha iyo qeexitaannada. Calaamadda qaadanaysa booskeeda si ay isugu muujiso inay tahay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Laba taleefan oo cusub oo ka mid ah nooca Faransiiska: Wiko View 2 Plus iyo Wiko Harry 2
Firefox waxay bilaabi doontaa inay kahortagto dabajoogayaasha biraawsarka laga bilaabo 2019